Ukuze ukufudumala imiklamo ngekwetinhloso letehlukene usebenzisa izinto ezahlukene namuhla, kuhlanganise ikakhulukazi polystyrene bungabonakala "Technonikol". Sici Its esiwuphawu izenzo ezihlukahlukene zokusisebenzisa. Indaba ingasetshenziswa ukwakhiwa, izakhiwo ubunjiniyela, kanye nokwakhiwa kwemigwaqo.
Indaba ine elinye igama - polystyrene extruded. isakhiwo Its kuhlanganisa usayizi encane cell amamilimitha angu 0.1 kuya 0.2. Ngenxa homogeneity zabo ezibonakalayo kuqinisekiswa. Siqukethe polystyrene ubuhlalu, okuyinto axutshwa e senqubo yokukhiqiza ukwenekwa umfutho ophakeme futhi lokushisa umxhwele. Lezi ejenti ohlabayo sengezwe, esakhiwa carbon dioxide futhi freon. Extruded polystyrene Foam yaziwa iminyaka engaphezu kuka ayisithupha, phakathi nalesi sikhathi, ke akuzange kusungulwe analogs ukuthi babe izakhiwo aphakeme we indaba echazwe.
polystyrene Expanded "Technonikol" has a izinga eyingqayizivele. Indaba ine ongaphakeme conductivity ezishisayo kudume ukumuncwa amanzi. Lesi sibalo ingeqi ukubaluleka 0.2% by volume. Egcwele phezulu cell, kodwa ukwehlisa ketshezi umane awufiki. Material ongasebenza phezu ububanzi lokushisa ububanzi okuyinto kuhluka degrees -75 kuya +75, kuyilapho ukuminyana ziyahlukahluka kusuka amakhilogremu ngalinye imitha cubic 28 kuya ku-60.
Izimpawu izinhlobo ezahlukene extruded polystyrene Foam
Uma unesithakazelo Styrofoam "Technonikol", kufanele ukujwayelana izinhlobo zalo eziyisisekelo ahlinzekwa ukudayiswa ngumkhiqizi. Ukuze baxazulule izinkinga zansuku zonke, ungasebenzisa i-XPS Carbon Eco, esetshenziswa ekwakhiweni Cottages yangasese futhi inedlanzana elincane storeys. Lokhu kwaziswa angathengwa ngokukhokha ruble 3,300 ngamunye imitha cubic.
Uma kunesidingo ukuze akwazi ukufeza umsebenzi endaweni cap noma olungaphambili lwesonto isakhiwo, kubalulekile ukuba ukuthenga XPS carbon Eco Fas, intengo okuyinto ruble 4000 ngayinye imitha cubic. Ukuze ukushisa ukwahlukanisa of phansi futhi izisekelo angasebenzisa omunye izinhlobonhlobo polystyrene anwebekayo - Carbon Eco SP, esibonakala by rigidity okusezingeni eliphezulu namandla. Ukuze desyatimillimetrovogo Indwangu ungqimba kuyodingeka bakhokhe ruble 4.300. ngalinye imitha cubic.
Izici Styrofoam "Technonikol" brand izicelo ezimbonini
polystyrene Expanded "Technonikol" senziwa futhi ngezinhloso ezimbonini. Omunye ezihlukahlukene Prof, esetshenziselwa zifudumele zezakhiwo ehhovisi, kuphephuke uphahla izakhiwo kwezohwebo kanye agcine. Prof UKWEHLELA - chungechunge, ehlanganisa amapuleti ezinhlanu, izilinganiso okukuvumela ukuba ukuqoqa ezihlukahlukene ifomu design. Lezi phakathi labo eyehlelayo ezithile.
SOLID esetshenziswa ngempumelelo e inqubo ojantshi amathrekhi kanye emizileni, njengoba uyakwazi othola load yakho iphezulu kakhulu futhi ukukhonza isikhathi eside, ngaleyo ndlela-ke akunakubhubha futhi abolile. Umenzi inikeza ukudayiswa isihlabathi, okuyinto yakhelwe ukwakhiwa usebenzisa isangweji panel.
izici qualitative kwezicelo zezimboni ezahlukene kusukela izakhiwo impahla ukwahlukanisa izixazululo imisebenzi yasendlini, kodwa futhi ukubaluleka ngowokuqala kabili. Ungakwazi ukuthenga ke i isilinganiso 6,000 ruble Russian ngalinye imitha cubic
polystyrene Expanded "Technonikol" impendulo okuyinto ngokuvamile omuhle kakhulu, kunezinzuzo eziningi, izinzuzo ezinjalo kufanele ukwaba chemical ukumelana nomswakama oxosha izici. Ngokusho abasebenzisi, le nto libhekene insimu ebanzi ukusetshenziswa, futhi okusezingeni eliphezulu umusi permeability. Abathengi akhethiwe polystyrene asebenzayo futhi ngenxa yokuthi liveza ukumelana enhle kakhulu kokucindezelwa.
Expanded polystyrene "Technonikol" Ukucaciswa lobuchwepheshe okufanele kucaciswe ngaphambi yokufuna lolu hlobo ukwahlukanisa, has ezithile. Njengoba abathengi bathi kuyinto anobuthi kanye amandla omlilo likhipha yingozi empilweni yomuntu. Izilwane ezifuywayo master ukucindezeleka ukuthi polystyrene ngempela kalula wokhela lapho zihlatshwa ilangabi, futhi kudinga ukusetshenziswa saziso ngesikhathi inhlangano umsebenzi a ingcina ekhethekile.
polystyrene extruded "Technonikol" yatha- yayo ngoba unenkambu sasivumela ebanzi isicelo. Isetshenziselwa kokubili umkhakha futhi ukwakhiwa yasekhaya. Nale impahla kungenziwa ngci olungaphambili lwesonto, kuhlanganise ngaphansi screed ezimanzi ahlotshiswa.
Bona letihambisana imikhiqizo ukwahlukanisa usebenzisa "Technonikol" amakhabethe nokunye ngomuthi ukuthi zisebenza ziyobhekana sihlobene umthwalo. Lokhu kumele kufake kokubili ophahleni iqonde futhi ezitshekile. Nale heater amakhaza elisophahleni isikhala endlini kungenziwa uguqulwe ube phansi ukhululekile elisophahleni, angasetshenziswa unyaka wonke. I ukushuba for kahle ukushisa ukwahlukanisa buzoba buncane kakhulu ukwedlula ukushuba we Foam noma amaminerali uvolo. Lokhu kungenxa yokuthi i-heater kudalulwe has a conductivity encane ezishisayo, lesi silinganiso kuyinto 0,028 W / MK.
Ngakho, i-polystyrene extruded "Technonikol" ezifanelekela ukwahlukanisa kwezakhiwo noma iyiphi injongo lapho, njengoba izidingo zihambelane ukonga isikhala. Lapha kufanele ukuhlukanisa verandas, balcony, amakamelo encane noma balcony.
Ngohlobo Lomuntu Okufanele Ube extruded polystyrene Foam - "TECHNOPLEX"
polystyrene Expanded "Technonikol" kabani izici uvumele ukwahlukanisa of yimuphi izakhiwo kanye izindawo uvezwa ukudayiswa ngesimo kwezinhlobo, okuyinto njengoba "TECHNOPLEX" ezaziwayo. Uphelele ekhaya ukwahlukanisa, ezisukela zifudumele of mbumbulu, siphetfo ukwahlukanisa of attics.
Esimeni isici kule ukwahlukanisa ukhonza Ukwakheka, okubandakanya izakhi ezincane graphite. Ngenxa yalesi "TECHNOPLEX 'liye landa amandla kanye ukumelana izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba deformations. Uma ucabangela Ukucaciswa "TECHNOPLEX" uzophawula ukuthi Coefficient conductivity ezishisayo kuyinto 0,032 W / Mk, kanti kwabantu impahla kuhluka 26 kuya 35 amakhilogramu ngalinye imitha cubic, ukubaluleka kuzoncika ukushuba umkhiqizo. umusi permeability Coefficient okulingana 0.01 W / Mk. Uma impahla emanzini usuku lonke, ke absorbency kuyoba 0.2%.
Styrofoam "Technonikol", ogama ukujiya zingahluka kusuka kwangu-40 kuya 120, has a ubude 1180 amamilimitha angu. Ububanzi izindwani kuyinto 580 amamilimitha angu, kodwa osayizi ngabanye kungenzeka ukukhiqiza amapuleti nge obuphelele kuze kube 3000 mm. Emaphethelweni amapuleti kungaba bushelelezi noma abe akhethiwe lesine.
Imininingwane Styrofoam brand "Technonikol Carbon Eco"
Ubuningi polystyrene extruded "Technonikol" iye okukhulunywe ngaye ngenhla, kepha okokusebenza echazwe kukhona nezinye izici eziningi, okumele ukwazi ngaphambi kokuthenga umkhiqizo. Ngokwesibonelo, kungenzeka kubhekisela emaqenjini ulayini "Carbon Eco", okuyinto uphelele ukwahlukanisa kwezindlu kanye Cottages. Uma iqhathaniswa nezinhloko-"TECHNOPLEX", ngesikhathi womshini "Carbon Technonikol Eco" ukungcola kusuka nanocarbon esetshenziswa, okwandisa izici ngamandla polystyrene Foam.
Thermal conductivity Coefficient ezihlukahlukene ukwahlukanisa kuyinto 0,029 W / Mk, kanti absorbance at ukucwiliswa ngokugcwele ngosuku kuyinto 0.2% ngo ivolumu heater. conductivity umusi okulingana kwesilinganiselo 0,011 mg / mchPa, kodwa wemfihlo nokunwebeka kuyinto 17 MPA. Esikhathini ukukhiqizwa "Carbon Eco" ilangabi retardants kunezelwa izithako kutawufaka sandla attenuation kwezingxenye ukungabi khona ukuchayeka ngqo ilangabi.
Izici polystyrene uphawu "Technonikol XPS 35-300»
polystyrene extruded "Technonikol", izimfanelo ozokwethulwa ngezansi ukuze uthole ezihlukahlukene XPS 35-300, bungabi ukumelana kokucindezelwa. Ukuze samuntu wathi, bangamaphesenti angu-300 i-KPA, ingasetshenziswa i-zifudumele ka ezithwele ngesikhathi ekusebenzeni ezakhiwe, okungukuthi uphahla nokunye. inhlanganiso Material kuyinto 35 Kilos per imitha cubic, kanye ukumelana eguqa kwaba 0.4 MPA, okuyinto okubonisa ngempela umxhwele, ikakhulu lapho uqhathaniswa izinto ezifanayo.
Amashingili: ukubuyekezwa. Amashingili noma insimbi: okuyinto engcono?